0 ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် Cokkieမူဝါဒ - Omron Healthcare Myanmar
ကျွနု်ပ်တို့၏ Gen Zero ဗားရှင်း
ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် Cokkie မူဝါဒ
ဝက်ဆိုဒ်တွင် အသုံးပြုသော အသုံးအနှုန်းများ
အိမ် > ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် Cokkieမူဝါဒ
ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် Cokkieမူဝါဒ
မူပိုင်ခွင့်နှင့် Cookie မူပိုင်ခွင့်နှင့် Cookie မူဝါဒ
Omron Asia Pacific Pte.Ltd. နှင့် အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ သြစတြီးယား၊ နယူးဇီလန် တို့တွင်ပါဝင်ပြီး တခြားအရှေ့အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားတို့ မပါဝင်သော (ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် Omron ဟု သုံးနှုန်းပါမည်) ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေသည့် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများသည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လေးစားလိုက်နာပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမူဝါဒသည် (ယင်းထဲတွင် ရည်ညွှန်းထားပြီးသော ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တခြားပါဝင်သော အချက်အလတ်များ) သင်မှ ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးအပ်သော သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ထံမှ တောင်းယူသော သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်၊ မည်သူတို့နှင့် မျှဝေအသုံးပြုမည်နှင့် သင်၏ အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သတ်၍ မည်သည့်ရွေးချယ်မှုများ ရှိသည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ "ကျွန်ုပ်လက်ခံပါသည်" ဟူသော ခေါင်းစဉ် သို့မဟုတ် တူညီသော တခြားခေါင်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ပါက သို့မဟုတ် Omron website ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ဝင်ရောက်ပါက သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများမှ တစ်ဆင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ပေးအပ်ပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူပါက Omron အနေဖြင့် သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းများကို ယခုမူဝါဒထဲတွင် ပါဝင်သော အသုံးအနှုန်းများအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အား ဝက်ဆိုဒ် မှဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူခြင်းတွေ့၍ဖြစ်စေ သင်ပေးအပ်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ ပါ ပါဝင်) အပြင် သင်၏ အမည်၊ ရုပ်ပုံ၊ လိပ်စာ၊ ကျား/မ၊ မွေးနေ့၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ် လိပ်စာ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုမှုပုံစံနှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (ဥပမာ - Credit Card သို့မဟုတ် Debit Card ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ) ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို သင်သည် Omron သို့ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဝက်ဆိုဒ်မှ ဖြစ်စေဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် Omron နှင့်သက်ဆိုင်သော မီဒီယာ ဆိုဒ် များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝက်ဆိုဒ် များအသုံးပြုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ၊ Post Material များ အသုံးပြုရန် စာရင်းပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဆိုဒ်သို့မဟုတ် မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် အကောင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊ Omron ၏ နောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတောင်းဆိုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပပြုလုပ်သော ထရိန်နင်းများ၊ Seminars တက်ရောက်ရန်စာရင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့မှထုတ်ပြန်သော သတင်းလွှာများကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန် စာရင်းပေးခြင်း၊ အာမခံရယူရန် အွန်လိုင်းမှစာရင်းပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Service Officer နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ မာကတ်တင်း ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ အေ့ဂျင့်များနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်အလုပ်ဝင်ရောက်ရန် သင်၏ အလုပ်လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း ကြားခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှသော်လည်းပေးပို့လျှောက်ထားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဧည့်စာရင်းစာအုပ်တွင် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များပေးပို့ခြင်း နှင့်/ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ရယူခြင်း အားလုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။ သင်သည် Omron မှ ကျင်းပ စီစဉ်ပြုလုပ်သော ကွန်ဖရင့်များ၊ စည်းရုံးရေးပွဲများ၊ Seminar များ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ ကမ်းလှမ်းပွဲများ၊ ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲှသောအခါတွင်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အဆင်မပြေမှု တစ်ခုခုကြုံတွေ့ရ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ တင်ပြသောအခါတွင်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို တောင်းဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်ဆက်သွယ်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် သုတေသနလုပ်ရန်အတွက် ကောက်ခံသော ဆန်းစစ်လေ့လာမှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပေးရန်လည်း တောင်းဆိုမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမေးခွန်းများကို သင်မဖြေဆိုလိုပါက မဖြေဆိုဘဲ နေနိုင်ပါသည်။
Omron ၏ ရုံးခန်း သို့မဟုတ် ဝက်ဆိုဒ် သို့ သင်ဝင်ရောက်လေ့လာသော နေ့ရက်၊ အချိန်၊ စာမျက်နှာ ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှု၊ ဝက်ဆိုဒ်ထဲသို့ ဝင်၍ ကြည့်ရှုတုန့်ပြန်မှု စသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
သင့် စက်ပစ္စည်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြစ်သည့် IP address ၊ Operating System နှင့် အသုံးပြုသည့် Brower အမျိုးအစား စသည်တို့ကို System Administration အတွက် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ကောက်ခံမှုသည် ဝက်ဆိုဒ် အသုံးပြုသူများ၏ အသုံးပြုမှုပုံစံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စာရင်းအင်းပြုစုရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူကို ဖော်ထုတ်ရန် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Suppliers ၊ Contractors ၊ Agents ၊ Vendors နှင့် Corporate Customers များမှ အလုပ်သမားများကို ဆက်သွယ်နိင်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းသို့ သင်လာရောက်သောအခါ၌ မှတ်တမ်းတင် ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ကူးထားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကျင်းပပြုလုပ်သော အခမ်းအနားများ၌ သင့် အား ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်းများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မပေးလိုပါက မပေးအပ်ဘဲ နေနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသုံးပြုခွင့်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ အလုံးစုံသော်လည်းကောင်း ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါက သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဆိုဒ်၏ တချို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် သင်တောင်းဆိုသော တချို့ ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပေးအပ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်နှင့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် လူအများ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သော သင်၏အချက်အလက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ရယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သည် သင့်အား တခြားအသုံးပြုများမှ ခွဲခြားနိုင်ရန် Cookie များ အသုံးပြုပါသည်။ Cookie ဆိုသည်မှာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ စာမျက်နှာများနှင့်အတူ သင်၏ Hard Disk ထဲတွင် Web Browser မှ သိမ်းဆည်းပေးထားသော သေးငယ်သည့် ဖိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Cookie ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့် သင်နောက်တစ်ကြိမ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲ ဝင်ရောက်ပါက သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ Server သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရာတွင်ပိုမို လွယ်ကူလာမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သင်သည် Cookie များကို အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Cookie တချို့ သို့မဟုတ် Cookie အားလုံးကို သင်အသုံးပြုနေသော Web Browser ၏ Setting မှတစ်ဆင့် ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုတွင် အဆင်မပြေခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြု၍ မရခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
လူမှုကွန်ရက်ဆိုင်ရာ ခလုတ်များနှင့် ကြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲ၌ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် Promote လုပ်ရန် (Like) နှင့် မျှဝေရန် (Tweet) ခလုတ်များပါဝင်ပါသည်။ ထိုခလုတ်များသည် သက်ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်များမှရေးဆွဲထားသော Programming Code အတိုင်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ခလုတ်များကိုအသုံးပြုလိုက်ပါက Cookie များကို သင့်ကိရိယာထဲတွင်သိမ်းဆည်းပြီးသား ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိပါ။ Omron ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲ၌ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် Promote လုပ်ရန် (Like) နှင့် မျှဝေရန် (Tweet) ခလုတ်များပါဝင်ပါသည်။ ထိုခလုတ်များသည် သက်ဆိုင်ရာလူမှုကွန်ရက်များမှရေးဆွဲထားသော Programming Code အတိုင်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ခလုတ်များကိုအသုံးပြုလိုက်ပါက Cookie များကို သင့်ကိရိယာထဲတွင်သိမ်းဆည်းပြီးသား ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မရှိပါ။ Omron သည် တစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများအပေါ်တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မကြာခဏမွမ်းမံပြုပြင်လေ့ရှိသော ထိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ပိုမိုနားလည်နိုင်ရန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များထဲသို့ မဝင်ရောက်မီ ဖတ်ရှုလေ့လာပေးပါ။
Cookie များကို ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း
Cookie များကို ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကို သင့် Web Browser ၏ Help Functionality တွင် အသေးစိတ် ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်သောအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သတ်သော တာဝန်များ
သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အားလုံးကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Omron Asia Pacific Pte. Ltd. သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စား အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရန် တခြားနိုင်ငံများတွင် အခြေစိုက်သော Third Parties များ၏ Database သို့မဟုတ် Servers များတွင် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ထို တခြားနိုင်ငံများတွင် အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းထားမှုသည် သင်နေထိုင်သောနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ နှင့်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ ကော်ပီများကို သင့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ Database သို့မဟုတ် Server များတွင် သိမ်းဆည်းပေးထားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်သော သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်မှု၊ ပြည့်စုံမှုရှိကြောင်း တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အချက်အလက်များလွဲှပြောင်းပေးခြင်းသည် လုံခြုံမှု အပြည့်အ၀ မပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း အင်တာနက်မှ တစ်ဆင့် သင်၏အချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လုံခြုံမှုရှိမည်ဟု အပြည့်အဝအာမ မခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့လွှဲပြောင်းပါက သင်၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရရှိသည်နှင့် Omron အနေဖြင့် တင်းကျပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံး၍ သင်၏ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်ပေးအပ်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သတ်၍ မေးမြန်းစရာများရှိလာပါက Customer Support ဌာနသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက်များကိုလည်း အောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ တချို့နေရာများအား ဝင်ရောက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အားပေးအပ်သော (သို့မဟုတ် သင့် ဘာသာရွေးချယ်သော) ဝှက်စာကို လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းရန် သင့်တွင်တာဝန် အပြည့်အ၀ ရှိပါသည်။ အကယ်၍ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သင်၏ ဝှက်စာ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါက ဝှက်စာကို လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ပေးပါ။
We may use information held about you for the following purposes:
To ensure that content from the Website is presented in the most effective manner for you and for your device, such as by developing, personalizing, and providing advertising and experience tailored to your interest.
To provide you with information, products or services that you request from us or which we feel may interest you, such as, by sending promotional e-mail messages, newsletters and promotional SMS messages and contacting potential product testers.
To deliver samples, premiums, products and information, or develop new products and services.
To allow you to participate or enroll in interactive features, contest, programs or offers of our service, when you choose to do so.
To notify you about changes to our service or products.
To respond to your queries, feedback, suggestions, complaints or comments.
To make availableaservice through which you can receive text or other types of messages from Omron such as SMS on your mobile device.
To ensure compliance with company policies, regulatory obligations and applicable laws.
To carry out research, planning and statistical analysis.
To assess your suitability as part of Omron’s hiring and recruitment process.
For accounting, risk management, compliance and record keeping purposes.
Unless you have indicated otherwise, we may also use your data to provide you with information about goods and services which may be of interest to you and we may contact you about these. Further, in case of purchase of our online products, any personal data may be used to process payment for purchases, subject to any privacy policies separately provided at the online store site. You may withdraw your consent for receiving promotional or marketing materials at any time by using the contact details at the bottom of this Policy or by clicking on the “unsubscribe” link which is embedded in the relevant email or message. Please note that if you unsubscribe we may still send you service related emails, such as product purchase receipts.
သင်၏ အချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း
Omron will take all reasonable steps to protect your personal data against unauthorized disclosure. Your personal data may be transferred and disclosed to and processed by any member of the Omron group, including, but not limited to, our ultimate holding company and its subsidiaries for the purposes of sending you promotional information about our products or services and any other purposes described herein.
In addition, your personal data may also be disclosed to or shared with:
Our trusted third party agencies on advertising, marketing and promotion to help us deliver and analyze the effectiveness of our advertising campaigns, events and promotions.
Our business partners foraco-promotion or joint program with Omron.
Our trusted third party service providers to perform variety of business operations on behalf of Omron, such as fulfilling product and service requests and answering inquiries, hosting websites, data processing and delivering our email or other communications.
Web analytics tool providers, such as Google.
Third party vendor for remarketing services, including Google’s ‘Customer Match’ and Facebook’s ‘Custom Audience’ to display ads (this means we may upload the contact information to third party vendors who perform remarketing services on our behalf).
Third parties required to deliveraproduct or service to you, such asadelivery or postal service delivering product to you.
Further, we may disclose your personal data to third parties:
If Omron or substantially all of its assets are acquired byathird party, in which case personal data held by it about its customers will be one of the transferred assets.
To protect and defend the rights and property of Omron (including enforcing our Terms and Conditions) and conduct investigations into possible breaches of applicable laws, and to protect against fraud and any technical or security vulnerabilities. If we are underaduty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal obligation or meet enforceable government requests whether within or outside Singapore.
In sharing your personal data, we endeavour to ensure that the third parties and our affiliates keep your personal data secure from unauthorised access, collection, use, disclosure, or similar risks and retain your personal information only for as long as they need your personal information to achieve the abovementioned purposes. In disclosing or transferring your personal data to third parties and our affiliates located overseas, Omron takes steps to ensure that the receiving jurisdiction has in placeastandard of protection accorded to personal information that is comparable to the protection under or up to the standard of the laws of Singapore or that other adequate safeguards are in place.
Omron ၏ လက်ခံသိမ်းဆည်းခြင်း မူဝါဒနှင့်အညီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်အညီသာ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို့ ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်မှီသည်အထိသာ သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သိမ်းဆည်းထားရန် မလိုအပ်တော့သော အချက်အလက်များကို ဖျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည် ပြင်ဆင်မရသည့် အမည်မဲ့ သိမ်းဆည်းအချက်အလက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲမည် ဖြစ်ပါသည်။
If you wish to access, correct and supplement the personal data that Omron holds about you or wish to withdraw your consent for or limit the processing of your personal data or if you wish to make any inquiries or complaints in respect of your personal data, or register an objection in connection with your particular personal circumstances or if you would like to unsubscribe from any Omron mailing list, please contact us by using the contact details at the bottom of this Policy.
Subject to any exceptions under applicable laws, Omron will honor your request or objection, or inform you as to whether and, if so, to what extent it is complying therewith within 21 days or such other time as is reasonable after we receive such request or objection.
Omron reserves the right to imposeareasonable fee for access of your personal data in the amounts as permitted under law.
To prevent misuse and meet your request or objection we might ask you to adequately identify yourself and/or provide other information that enables us to locate your personal data. If you request access to personal data linked toacookie, you must send usacopy of the relevant cookie, which can be found via your web browser preferences.
Minor နှင့် တခြားသူများထံမှ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
Omron သည် အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသူများ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဥပဒေအရ အသက ်မပြည့်သေးဟုသက်မှတ်သူများ ထံမှ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ကောက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ မိဘ သို့မဟုတ် ဥပဒေအရ အုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပါက အသက်မပြည့်သေးသူကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ မပေးပို့ရန် တာဝန် ရှိပါသည်။ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အသက်မပြည့်သေးသူ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ခြင်းသည် သင့်အနေဖြင့် ထိုသူ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းဆည်းရန် ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ပုဂိုလ်ရေးအရ လက်ခံပြီး ထိုသူ သို့မဟုတ် သူမ၏ လုပ်ရက်များအတွက် တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် တခြားသူများ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ ပေးပို့လာပါက (ဥပမာ သင်၏ အိမ်ထောင်ဖက်၊ မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ အလုပ်သမားများ) သင်သည်၎င်းတို့အား ကိုယ်စားပြုသူဖြစ်ပြီး သင်သည်၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို Omron သို့ ပေးပို့ရန် တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ယခုမူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Privacy နှင့် Cookie မူဝါဒ ပြောင်းလဲခြင်းများ
Omronသည် ဤ Privacy နှင့် Cookie မူဝါဒများကို မည်သူကိုမျှ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အမြဲ လေ့လာပြီး Privacy နှင့် Cookie မူဝါဒ များ ပြောင်းလဲမှု ရှိ၊ မရှိကြည့်ရှုပေးပါ။ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ရရှိထားသော သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ သင်သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ မည်သည့်နေရာကိုမဆိုဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဤမူဝါဒများ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရေးသားခြင်း တို့ကို သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ထားသော ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ထံမှရရှိထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ဆင် ရေးသားထားသော မူဝါဒအရ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် သဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် တည်ဆဲ Privacy နှင့် Cookie မူဝါဒများကို သိရှိနိုင်ရန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ မကြာခဏ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ တချို့သော Privacy နှင့် Cookie မူဝါဒများတွင် ပါဝင်သော စည်းကမ်းများကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အတွင်းရှိ စာမျက်နှာများတွင် ရှိသော ဥပဒေဆိုင်ရာ အသိပေးချက်များတွင်လည်း ဖော်ပြထားနိုင်ပါသည်။
Omron သည် သင့်အနေဖြင့် ယခုဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန် Cookie များအသုံးပြုပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုပါက ဤနေရာမှ စ၍ကျွန်ုပ်တို့၏ Privacy နှင့် Cookie မူဝါဒများကို လိုက်နာရန် သဘောတူညီပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤမူဝါဒနှင့် ပတ်သတ်၍ မေးခွန်း၊ ကန့်ကွက်လွှာ၊ မှတ်ချက်နှင့် တောင်းဆိုစရာများရှိပါက သို့မဟုတ် Privacy ဥပဒေများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လိုက်နာရမည့်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သတ်၍ အကြံပြုလိုပါက ကြိုဆိုပါသည်။ အကြံပြုလိုပါက
438B Alexandra Road, #08-01/02,
Alexandra Technopark Block B,
+65 6835 3011 ထံသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကျွနု်ပ်တို့ထံ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါက Grievance Officer ဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးစေလိုပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
6th floor, B-Block, Sews Tower, Plot No.19, Sector-18, Udyog Vihar, Maruti Industrial Complex, Gurgaon (Haryana) 122008, India
+91 124 7122700
ကျွန်ုပ်တို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်စီမံပုံနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် အကြံပြုချက်ကိုမဆို အလေးအနက်စဉ်းစားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါမည်။
ယခု မူဝါဒသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး တခြားမည်သည့် ဘာသာသို့မဆို ပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ယခုမူဝါဒနှင့် ပတ်သတ်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် တခြားဘာသာဖြင့် ရေးသားထားမှုအကြား အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိလာပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူဝါဒကိုသာ အတည်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုမူဝါဒကို ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကြည့်ရှုရန် | OMRON Healthcare Asia ၏ မူပိုင်ခွင့်၂၀၂၀